मनोरञ्जन – Page3– Janasamsad
कलाकारको योग्यता : अन्टसन्ट बोली, उट्पट्याङ काम र आरोप प्रत्यारोप !
काठमाडौं । एक भनाई छ, ’नाम होस्, बदनाम होस्, तर गुमनाम नहोस्!’ यो धेरै हदसम्म चर्चाका लागि ’मुम्बइया शैली’ पच्छ्याउने कलाकारहरूका हकमा लागु भइरहेको छ। चर्चामा आउन उनीहरू अनेक फण्डा निकाल्छन्। विवादमै आएर भएपनि चर्चामा रहिरहन उनीहरूको अन्तिम ध्येय रहेको सजिलै बुझिन्छ। आफूलाई नेपाली सिने क्षेत्रको ’हस्ती’ का हैसियतमा चिनाउन...
युनिशा बनिन अन्तर्राष्ट्रिय लिम्बू टिकटक प्रतियोगितामा प्रथम
दमक । दुई महिने अन्तर्राष्ट्रिय लिम्बू टिकटक प्रतियोगिता इलाम माङ्सेबुङ् निवासी युनिशा साँबाले जितेकी छन् । हङकङ रहेर नेपाली कला संस्कृतिमा निरन्तर लागि राखेका कला संस्कृतिका अभियन्ता फुलेन्देको बाउ उपनामले परिचित मौसम लिम्बूद्वारा लिम्बू कलासंस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नको कोरोना कहरसँगै गरिएको लकडाउनमा संसारभर लिम्बू गीतलाई प्रचारप्रसार होस् भन्ने अभिप्रायले टिकटक प्रतियोगिता...
टिकटक प्रतियोगितामा ८५ जना प्रतिष्पर्धीलाई उछिन्दै प्रथम भइन् जुनु
झापा । झापा–मोरङ अनलाइन फेसबुकमार्फत एक सातादेखी गराइएको टिकटक प्रतियोगितामा मोरङ सुन्दरहरैचा नगरपालिकाकी जुनु कार्की ८५ जना प्रतिष्पर्धीलाई उछिन्दै प्रथम भएकी छिन । प्रतिगितामा दोस्रो खोर्साने मोरङकी अप्सरा कार्की, तेस्रो उर्लाबारी निवासी एलिसा कार्की भएकी छिन भने सान्त्वना स्वरुप चौथो बिराटनगर निवासी प्रमिला निरौला, पाँचौ धरानकी रुजा ठकुरी र उत्कृष्ट अभिनयतर्फ...
के आयो जमाना !
मातृका लामिछाने के आयो जमाना ! बिहेको कोटमा माहुर होइन नागरिकता बोक्नुपर्छ, सिउँदोमा नागरिकता सटिञ्छ यदि भने वारीपारी बिहेबारी रोक्नु पर्छ ! अन्यथा नागरिकता भन्दा पहिले सुबिधा कार्ड देउ देशको कानुन, रहन सहन बुझेपछि बल्ल नागरिकता देउ ! देशमै जन्मेकोले त नागरिक हो भन्न १७ बर्ष कुर्न पर्छ डेढ दशकसम्म उ अनागरिक भै बस्नु पर्छ बिहे गर्दैमा तिमि यो देशको नागरिक कसरि भयोउ...
अहिलेको विषम परिस्थितिमा सरकारले आफूलाई सहुलियतमा ऋणको व्यवस्था गरिदिनुपर्नेमा कलाकारहरूले जोड दिएका छन् । कोभिड–१९ का कारण कलाकारिता क्षेत्र धराशायी भएको भन्दै केही वर्षका लागि सरकारले कलाकारलाई सहुलियतमा लोन दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । अभिनेता दयाहाङ राई सरकारले कलाकारलाई धितो नदिने गरेको बताउँछन् । नियमित आय स्रोत हुँदैन भनेर कलाकारलाई सरकारले...
मातृका लामिछाने कोहि भन्छन तँ भदा होस् , भाइ होस् तँ भतिज होस् , दाइ होस् त लोग्ने होस् ज्वाई होस् त छोरो होस् मामा होस् त बाबु होस् काका होस् तँ राजा होस् मन्त्रि होस् तँ नेता होस् दास होस् तँ मालिक होस् नोकर होस् तँ देउता होस् तँ राक्ष्यस होस् तँ पागल होस् सज्जन होस् तँ साथि होस् सत्रु होस् तँ...
अभिनेता सुशान्तसिंह राजपूतद्वारा आत्महत्या
एजेन्सी । चर्चित अभिनेता सुशान्तसिंह राजपूतले आत्महत्या गरेका छन् । उनले बान्द्रास्थित आफ्नै घरमा आत्महत्या गरेका हुन्। सुशान्तको आत्महत्याको खबर सुशान्तका घरमा काम गर्ने कर्मचारीले बान्द्रा प्रहरीलाई दिएको बीबीसीले समाचारमा जनाएको छ । टेलिभिजनबाट करियर सुरु गरेका उनले पछिल्लो समयमा ठूलोपर्दामा उल्लेखनीय अभिनयका कारण चर्चा कमाइरहेका थिए । ‘डिटेक्टिभ ब्योमकेश बक्सी, एमएस...
सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै लैजाने नीति लिएको छ । यसका लागि सरकारले विभिन्न चरण समेत तोक्ने तयारी गरेको छ । सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने नीति लिएसँगै कुन क्षेत्र कहिले खुल्ने भन्ने पनि स्पष्ट हुनेछ । सरकारको लकडाउन खुकुलो बनाउने नीति हेर्दा, चलचित्र भवनहरू भदौ अगाडि खुल्ने सम्भावना छैन ।हल खुलेपछि...
नेपाली मुलका दिवेश अमेरिकन आइडलको उत्कृष्ट ७ मा
झापा। विश्व प्रसिद्ध गायन प्रतिभाको खोज रियालिटी शो अमेरिकन आइडलको उपाधि यात्रामा नेपाली मूलका दिवेश पोखरेल उत्कृष्ठ ७ मा पुगेका छन् । अमेरिकन आइडलको १८ औँ संस्करणको उपाधि यात्रामा अघि बढ्ने क्रममा दिवेश उत्कृष्ट सातमा पुगेका हुन् । प्रतिस्पर्धीबीचमा मतका आधारमा आइतबार सर्वाधिक मत ल्याउने उत्कृष्ट सातको छनोट गरिएको हो । अमेरिकाको...
लेखक खेमलाल पोखरेललाई अन्तर्राष्ट्रिय मेडल
राजु पोख्रेल दमक / दमकका खेमलाल पोखरेलले अन्तराष्ट्रिय मेडल प्राप्त गरेका छन् । नेपाली भाषा,साहित्य,कला,संस्कृतिका क्षेत्रमा क्रियाशिल उनले सेक्सपीयर जयन्तीका अबसरमा विश्वकै उत्कृष्ट लेखकहरुमा छनौट भएका हुन् । दमकको मेची अंग्रेजी माविका संस्थापक रहेका पोखरेलले पिएचडीका विद्यार्थीको शोधको समेत सम्पादन गर्ने गरेका छन् । साहित्य सिर्जनामा लामो समय ब्यत्तित गरेका उनी प्रतिभा निकेतन...